Home Wararka Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA oo sheegay inuu jiro qorshe ay xildhibaano...
Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA oo sheegay inuu jiro qorshe ay xildhibaano isku qarxin rabaan Xalane
Taliye ku-xigeenkii hore Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA Ismaaciil Daahir Cusmaan ayaa sheegay inuu jiro qorshe is-qarxin ah oo qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ay ka fulin rabaan Xalane.
Ismaaciil ayaa sheegay in xogta qorshahaan ay heleen wakiilada beesha caalamka ee degan xarunta Xalane, ayada oo qorshahaan fulintiisa loo xil saaray shaqsiyaad kamid ah golaha shacabka ee cusub
Bartilmaameedka u weyn ee qorshahaan ayuu ku sheegay inay tahay safiirada beesha caalamka ee ku sugan Xalane iyo madax kale oo uusan si shaacsan u carabaabin.
“Qolyaha Xalane degen ayaa helay Xog iyo qorshe ah in qaar ka mid ah Xildhibaanada cusub lagu tashkiiliyay in ay isku qarxiyaan qaar ka mid ah safiirada ama madax kale,” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Waxa uu intaas kusii daray qoraalkiisa “Qoraalka NISA waa iska bari yeelid haddii uu fulo qorshaha Villa Somalia.”
Qoraalka Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA ayaa imanaya saacado kadib markii uu Taliska NISA soo saaray digniin qeyrul caadi ah oo ku aadan shirqool ay sheegtay in Al-Shabaab ay dooneyso inay ku disho Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Arrintaan ayaa imanaysa xili uu Ra’iisul Wasaare Rooble sheegay in uu helay hanjabaado dil, islamarkaana siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha doorashada ay marayaan heerkii ugu cuslaa ee khilaafka hareerayay doorashada.
Previous articleDrought, high temps in Somalia are pushing people to move to other towns
Next articleUrurka argagaxisada Al Shabaab oo iska fogeeyay hadalkii hay’adda NISA
Wasiir Warfaafinta oo weerar afka ku qaaday Dowlada UAE